TAMAANDHADA UGU FIICAN EE LAGU KORIYO AQALKAAGA - NOOCYO YAANYO
Beeraley kasta oo doonaya inuu sameeyo wax uu jecel yahay - beerta - ma aha oo kaliya xagaaga laakiin sidoo kale jiilaalka.
Si arrintan loo sameeyo, dadku waxay la soo baxeen koriyo - meelaha la ilaaliyo ee ciidda, halkaas oo aad kori karto dalag kala duwan cimilada iyo heerkulka.
Haddii aad horay u dhisay aqalka dhirta lagu koriyo oo raadinaya noocyo yaanyo ah oo hubaal ku kori doona boggaaga, markaas jawaabta ayaa ku jirta maqaalkan.
Kala duwanaanta "Budenovka"
Waxay cadeeysaa Noocyada bartamihii dhexe, sida ay ku bislaadaan 105 - 100 maalmood ka dib biqilka.
Kantaroolin duurka, aad u sarreeya (illaa 1.5 m). Burburku wuxuu u muuqdaa mid daciif ah, ma laha awood muuqata. Miro waaweyn, miisaanku wuxuu gaari karaa 0.3-0.4 kg, wadnaha-qaabeeya oo leh dhamman wax yar oo la soo jeediyey, dusha sare ee qallalan, casaan.
Jirka waa mid aad u casiir leh, cufan, dhadhankiisu waa isku dheelitir, ma aha mid macaan. Laga soo bilaabo hal baadiyaha waxaad qaadan kartaa 4 - 5 kg oo miro ah. Cadaadiska cayayaanka goor dambe iyo cudurrada kale ee loo yaqaan yaanyada ayaa lagu arkay. Ha furin.
miraha waa qurux badan, dhadhan fiican
cudurku u adkaysta
maaha mid u nugul duufaanka
Cilladaha aan la ogaan.
Beeridda beereed waxay u baahan tahay in la sameeyo 50 - 55 maalmood kahor beeritaanka aqalka dhirta lagu koriyo. Sida sheyga beerto, waxaad isticmaali kartaa labadaba miraha la iibsaday iyo adiga kuu gaar ah. Laakiin aad u baahan tahay inaad si taxaddar leh u tixgeliso abuurka, iyo waxaa ka wanaagsan in la hubiyo kartida kartida. Si arrintan loo sameeyo, miraha ku dhex dar xal saline ah (fiiro gaar ah 1.5%) oo dooro abuurka kuwa aan kor u qaadin dusha sare.
Sida weelasha lagu beero dhejis iyo cajalado, iyo sanduuqyada caadiga ah, iyo dhar qaas ah oo la iibsan karo.
Sida ciidda, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho isku dar ah ciidda khaaska ah, kaas oo lagu kobciyo maadooyinka iyo bilaash ka soo baxa fangaska oo waxyeelayn kara geedo. Markaad buuxiso weelka dhulka waa in si taxadar leh loo xiraa.
Si aad uisisid abuurka waxaad u baahan tahay godad gacmeed ama wax qabad ka dibna markaa la seexan kara ciidda. Si aad geedo dhaqso ah u dhaqso, waxaad u baahan tahay dabool weelka leh filimka. Laakiin sida ugu dhakhsaha badan abuurka ayaa kor u kaca, filimku wuxuu u baahan doonaa in laga saaro.
Geedka canjeerku wuxuu jecel yahay laydh badan, sidaa darteed waxaad u baahan tahay inaad meel dhigto meel wanaagsan oo iftiin leh ama laydhadh gaar ah. Heerkulku sidoo kale aad ayuu muhiim u yahay. Waxtarka ugu wanaagsan wuxuu noqon doonaa 22-25 ° S, inta lagu jiro qufacu waa in la yareeyo 17-20 ° C. Waraabinta geedo yaryar waa inay noqdaan kuwo faleebo, iyo duurka horay u koray - ee digsiga.
Waxaa lagama maarmaan ah in lagu beero geedo marka ay korodho dhererka 5 ilaa 6 cm Bacriminta waxaa lagu sameeyaa 3-4 jeer muddada koritaanka iyadoo la raacayo mudo ah 2 todobaad. Waxaad u baahan tahay inaad sameysid organics, nasiib iyo kor uqaadayaasha koraya. Noocyada noocan oo kale ah sida "Budenovka", soo degitaanka 3 geedo halkii 1 sq.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan sifooyinka tamaandho sii kordhaya.
Mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan marka koraya yaanyada aqalka dhirta lagu koriyo waa inay ka hortagaan qoyaanka xad dhaafka ah ee dhulka. Sidaa daraadeed, dhirtaas waxay u baahan yihiin in badanaa la waraabiyo, laakiin ma badna. Waa la oggol yahay in la sameeyo habkan 5-7 maalmood, iyo subaxda ama cimilada daruurta leh.
10 maalmood ka dib markaad beerto waxaad u baahan tahay inaad samayso waraabinta ugu horeysa. Heerkulka biyaha waa inuu ahaadaa ugu yaraan 20-21 ° C. Muddada horumarinta duurka yaanyo waxay u qaybsan yihiin firfircoon (kahor iyo ubax ka dib) iyo firfircoon (waqti ubax). Wajiyada aan firfircooneyn, mugga biyaha halkii qayboodba waa 4-5 litir, marxaladda firfircoon, 10-12 litir.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee aqalka dhirta lagu koriyo - awoodda lagu xakameeyo heerkulka. Xilliga xagaaga oo dhan, heerkulku waa inuusan ka badnayn 26 ° C waana inuu hoos u dhaco 14 ° C. Guga waxaa lagu gartaa heerkulka habeenkii. Si taasi aysan u saameynin yaanyada, waxaa lagama maarmaan ah in lagu bixiyo aqalka dhirta lagu koriyo leh hawo leh heerkul ah 16-17 ° C.
Heerkulka ugu fiican ee yaanyo kasta waa 19-21 ° C. In kasta oo xaqiiqda ah in noocyada yaanyada "Budenovka" loo arkaa dhir aan qabyo ahayn, waxay u baahan yihiin garaf.
Sidaas oo kale midhaha kala duwan ee noocaani waa mid aad u culus, caleemaha si fudud ma istaagi karo oo jebin karo. Sidaa daraadeed, baadiyaha kasta waa in loo xiraa taageero ama damaashaad. Waa in si joogto ah loo sameeyaa. Sidoo kale, si looga fogaado culus xad-dhaaf ah baadiyaha, waxaad u baahan tahay inaad dhirta gashato.
Fasalka "Budenovka" 3 - 4 burush ayaa ku filnaan doona, laakiin lambarkoodu waa in la yareeyaa, haddii midab badan la abuuro. Kala sooc "Budenovka" waxay u baahan tahay quudin joogto ah leh fosoorka iyo potassium, sidaas darteed waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah u sameyso superfosphate iyo potassium salt.
Sidoo kale loo baahan yahay iyo Bacriminta dabiiciga ah. Dharka ugu horeeya wuxuu u baahan yahay in la sameeyo 10 - 13 maalmood kaddib marka la beerto. Tirada guud ee quudinta waa inay ahaataa 3 - 4 muddada koritaanka iyo horumarka oo dhan.
Noocyo iska caabin ah "Budenovka" cuduro kala duwan ma aha ka hortag cudur, iyo gaar ahaan xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo. Sidaa darteed, waxaan u baahanahay tallaabooyin ka hortag ah.
Si loo ciribtiro muuqaalka cudurrada, waxaa lagama maarmaan ah in lagu daweeyo geedo iyo duurka leh fungicides iyo xal toon. Hawlgalka ayaa la qaadaa 3 jeer: 20 - 21 maalmood kaddib marka la beero, 20 maalmood kadib daaweynta ugu horeysa iyo muddada ubax ee burushka 3aad. Sidoo kale ka hor bilawga xilli aad u baahan tahay inaad bedesho lakabka sare ee dhulka (10 - 15 cm) si looga saaro jiritaanka fungal fungal.
Qeexida darajada "buuxinta cad"
Kala duwanaanta kala duwan, hore (waxay u bislaadaan 2.5 - 3 bilood). Buundada way hooseeysaa, ilaa 60 - 70 cm dhererka. Duurka u ma laha jirid, branching waa daciif. Miraha ma aha mid aad u ballaaran, miisaanku wuxuu gaaraa 80-100 g, wareega, siman, dhadhan dheelitiran, casaan.
Iyadoo daryeel wanaagsan, dhalidda waxay noqon kartaa ilaa 8 kg oo miraha bislaado ah 1 mitir oo laba jibbaaran. Waxaa jira u nugul in laga adkaado cudurada. Ku filan qabow u adkaysta. Miraha ku dhowaad ma burburin.
miraha tayo sare leh
waxaa laga yaabaa in uu saameeyo cudurada
Geedo koraya. Waqtiga ugu habboon ee geedo beerto waa dhamaadka Maarso ama bilowga Abriil. U hubso in aad qallajiso geedo toddobaad iyo badh ka hor inta aan dhulka la dhigin. Geedo Root ah ee lagu koriyo waxay noqon kartaa muddada u dhaxaysa May 15 - 20, marka uusan dhaxan habeenkii. Waa lagama maarmaan in dhulka la raaco iyadoo la raacayo qorshaha 50x30-40cm, halkii 1 sq.m. Goobta ayaa si fiican u heli doonta geedaha 7 - 9. Dhulka ugu haboon waa dhul madow.
Nidaamyada caadiga ah: waraabinta biyo diirran, bacriminta, ilaalinta dheelitirka kulka. Kala duwanaantani uma baahna garaf, maadaama ay tahay mid go'aaminaya. Marka xoqitaanku ka tagi karo laba caws ah si aad u hesho dhalid dheeraad ah.
Kala duwan yaanyo "Dub Prince"
Yaanyada bartamihii bartamihii wuxuu bilaabmaa inuu midho dhalo 110 - 125 maalmood ka dib caleemaha kowaad.
Qodobbada aan dhicin, waxay gaari karaan dherer ahaan 2.5 m. Miraha way ka duwan yihiin qaabka, waxay ku xiran tahay miisaanka. Celcelis ahaan, miisaanka waa 100 - 450 g, taas oo ah mid ka mid ah faa'iidooyinka noocyada kala duwan.
Midabka waa midab madow, markaa magaca. Dhalidda wanaagsan, 4 - 5 kg oo khudrad ah ayaa laga saari karaa hal baadiyaha. Tamaandho waa macaan oo dhadhan, laakiin waxaa jiri kara dareen yar. Waxay muujinaysaa iska caabin ah phytophthora.
kala duwan ee miraha qaabka iyo miisaanka
iska caabin u gebogebo goor dambe
miraha waaweyn ee la jarjaray
Xaabood ayaa noqon doona mid aad u wanaagsan haddii aad ku beeri geedo ee lagu koriyo ah, halkii ka beeridda abuurka. Waxaa jira tiro ficil ah oo la xidhiidha beerista geedo of noocyo gaar ah this.
Marka hore, isla markiiba ka dib beerashada miraha, weelasha waa in lagu hayaa heerkul sare (26 - 27 ° C) oo si joogto ah u waraabiyo.
Marka labaad, ka hor inta aanadin dhulka waa in si joogto ah loo waraabiyo. Marka geedo soo kordhay, ka dibna wax kasta waa in la sameeyaa iyadoo loo eegayo nidaamka caadiga ah - geedo u baahan biyaha, quusto, bacrimiya.
Dhulgariirku wuxuu bilaabmayaa bilowga - bartamaha May. 1 kiiloomitir. mitir waxay ku dabiibi karaan geedo 3 - 4 ah. Superphosphate ama Bacriminta kale ee ku jira fosfooraska waxay u baahan yihiin in lagu daadiyo daloolo ama sariiraha, maadaama ay kala duwan yihiin boqortooyada Black Prince waxay u baahan tahay waxyaabo badan oo kala duwan.
Tusaalooyinka daryeelka: "Prince Black", sida noocyo kale oo badan, waa in lagu waraabiyaa si joogto ah, sida yaanyada "jacayl" ciidda qoyan. Bacriminta duurka u baahan tahay in la bilaabo marka ay Bloom. Waxaa lagama maarmaan ah in la bacrimiyo macdanta iyo macdanta organic.
Kala duwanaanshaha "Cardinal"
Waxay tilmaamaysaa yaanyada lakabka ah, waxay u yimaadaan fruiting ka dib 110 - 115 maalmood ka dib biqilka.
Dhirta aan caddayn waxay ku koraan dhererka hal mitir iyo badh.
Burushka ugu horreeya waxaa la dhigaa heerarka kor ku xusan 8 - 9.
Miraha burushkan waa kan ugu weyn - 0.7 - 0,8 kg. Dhammaan yaanyada kale ee miisaankoodu miisaamaa hal iyo badh - laba jeer ka yar.
Miraha waa wareegsan, lafdhabarka, qaabka casaanka ah. Dhadhanka macaanku waa macaan, miraha miro ayaa yar.
Dhalidda sarelaga bilaabo 1 jibbaaran. mitir ayaa la qaadi karaa 7 - 8 kg oo yaanyo ah.
miro macaan leh
Dhibaatooyinka lama helin.
Beeridda abuurka ah ee geedo u baahan yihiin in la sameeyo dhammaadka March ama horraantii Abriil. Habka geedo sii kordhaya waa heer. Marka laga beerto dhulka "da'da" ee geedo waa inay noqdaan 55 - 70 maalmood. Qorshaha beeritaanka waa 0.7x0.3x0.4 m 3 - 4 geedo kala duwan oo noocaan ah ayaa si wada jir ah u wada noolaan doona aagag.
Tiknoolojiga beeraha sidoo kale waa heer caadi ah - waraabinta joogtada ah, qashinka, ka saarista tallaabooyinka iyo bacriminta.
Kala sooc "Faashadda Honey"
"Honey drop" - wakiil ah yaanyada cherry.
Xidho badan, dhererku wuxuu gaadhaa 2 mitir, aad u xoog badan, caleemo waaweyn.
Miraha waa yar yihiin, miisaankoodu yahay ilaa 30 g, muuqaalkuna wuxuu u eg yahay dhibic biyo, caleemo huruud ah, macaan.
Miraha waxay ku koraan rucubo, waxaa jiri kara 15 yaanyo ah hal laan.
Darajada "Honey drop" waxay u adkaysatay dabaysha goor dambe iyo madadaalo.
miro aad u fiican oo tayo sare leh
iyada oo aan duurka u koraan tiro badan oo daaqsinka ah
Seeds of noocyada this leeyihiin biqilka sare. Grow geedo u baahan yahay sida caadiga ah. Waxaad u baahan tahay inaad ku beeri duurka kasta 45 - 50 cm.
Daryeelka yaanyadani kama duwana beerashada noocyo kale oo aan caddayn. Sida ka hortagga cudurada fangas, duurka u baahan tahay in lagu daaweeyo phytosporin.
Fasalka "Black Russian"
Waxyaabaha kale ee yaanyada madow.
Sredneranny, ripens in 110 - 155 maalmood.
Bushka waa mid aad u awood badan, caleemaha waa weyn.
Kusoo baxu wuxuu gaaraa dherer 1 - 1.5 m.
Miraha waa weyn yihiin, oval-qaabeeya, kuxirsan dusha sare, oo gaadhaya 150 g miisaanka, iftiin guduud mugdi leh oo leh xargaha brown.
Dhadiska ayaa lagu qiimeeyaa sida ugu fiican.
Taabashooyin noocyo kala duwan oo cuduro ah, waxay ku adkaataa xaaladaha halista ah.
Wixii geedo sii kordhaya waxay isticmaalaan habka seedling. Laakiin waxaad geedo iyo iibsan kartaa. Ma jiraan wax laga baddalo geeddi socodka caadiga ah ee geedo sii kordhaya ee noocyada kala duwan.
"Black Russian" uma baahnid daryeel gaar ah, sidaa daraadeed, duurka yaanyadani waa la kobcin karaa iyada oo ku saleysan aqoonta caadiga ah.
Iyada oo yaanyada noocan oo kale ah aqalkaaga kululeyntu wuxuu si joogto ah u siin doonaa miiskaada khudaarta cusub. Cunto xumo.
Fardo fuushan qalabka Orlov